Donald Trump Oo U Duulay Magaalada London, Masuuliyiinta Britain Ee Uu La Kulmi Doono Iyo Xogaha Muhiimka ah Ee Safarkiisa - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDonald Trump Oo U Duulay Magaalada London, Masuuliyiinta Britain Ee Uu La Kulmi Doono Iyo Xogaha Muhiimka ah Ee Safarkiisa
Donald Trump Oo U Duulay Magaalada London, Masuuliyiinta Britain Ee Uu La Kulmi Doono Iyo Xogaha Muhiimka ah Ee Safarkiisa
Washington (Jigjigaonline) – Madaxweyne Trump ayaa ku sii jeeda Britain halkaas oo ay uga billaabanayso booqasho rasmi ah oo saddex maalmood ah.
Arrintaas ayuuna ku tilmaamay safar aad muhiim u ah, dhanka kalana Ra’iisulwasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay tahay fursad lagu sii xoojin karo calaaqaadka aadka u wanaagsan ee labada dal ka dhaxeeya.
Balse siyaasadaha labada dal ayaa kala duwan marka ay timaaddo xaaladda Iiraan iyo isbadalka Cimilada Adduunka. Iyadoo arrinta booqashaduna ay taagan tahay, safiirka Maraykanka u fadhiya Britain ayaa ka digay in London ay la macaamisho shirkadda Huawei ee Shiinaha laga leeyahay, gaar ahaanna marka ay timaaddo khadka casriga ah ee 5G loo yaqaanno.
Dhanka kalana intii uusan duulin madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu soo dhawaynayo wadahadal uu lagalo Mexico, balse uu doonayo in dawladdaasi ay qaaddo tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku joojinayso soogalootiga ku qulqulaya Maraykanka.
Mexico ayuu markale ku eedeeyay in ay Maraykanka ka faa’iidaysanayso, wuxuuna ugu baaqay in ay arrintaas ka waantawdo.